ဆောင်းရယ်၊ နှင်းရယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူရယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆောင်းရယ်၊ နှင်းရယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူရယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ဆောင်းရယ်၊ နှင်းရယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူရယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on May 5, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 55 comments
ပြည်ကြီးငါး အစပ်ချက်+ ကန်စွန်းရွက်ကြော် + ဝက်ရိုး ဟင်းချို
– ပြည်ကြီးငါးကို အရွယ်တော် တုံး (၅၀သား)
– သများတော့ ပျင်းလို့ မမွှန်းဘူးးး မပျင်းရင် မွှန်းလိုက်ပါဦးးး
– ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ပါးပါးလှီးးး (နီ ၂ ဥ၊ ဖြူ ၃ မွှာ)
– ငရုပ်သီးစိမ်း အနီရောင် (ဒီမှာတော့ အဲဒီ ငရုတ်သီးပဲ ရှိတယ်) ကို ပါးပါးလှီး (၅ တောင့်)
– ဆီအိုးတည် (ဆီ ဟင်းဇွန်း ၃ ဇွန်း)၊ ဆီပူရင် ခုန က ပါးပါးလှီးထားတဲ့ သွန်နီ/ဖြူ နဲ့ ငရုတ်သီးထည့် ဆီသတ်
– နွမ်းလာရင် ပြည်ကြီးငါးထည့်
– ငံပြာရည် (ဟင်းဇွန်း ၁) + ရှာလကာရည် (ဟင်းဇွန်း ၁) + သကြား (ဟင်းဇွန်း ၁) + ကော်ရည် (မှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ + ရေ ဟင်းဇွန်း ၁) သမအောင်မွှေထားတာကို အကြော်အိုးထဲ လောင်းထည့်
– အနှစ် ပျစ်လာရင် အပေါ့အငံ မြည်းပြီး စားပါ။
– ကန်စွန်းရွက်တော့ ကြော်တတ်ပါတယ်နော့။
– ဝက်ရိုးဟင်းချိုထဲ မုန်ညင်းဖြူလေးခပ်ထားတဲ့ ဟင်း နဲ့ တွဲစားပါလေ။
ပြည်ကြီး ခရုဆီဟင်း + သခွါးသီး သုပ်
– ခါချက်ဥရယ် (၃ တောင့်)၊ ဂေါ်ဖီပွင့်ရယ် (အသေး ၁)၊ ဘေဘီ ပြောင်းဖူး (၅ ခုလောက်) ရယ် လှအောင်လှီးးး (အလှပြင်ပြီး လှီးခိုင်းတာ ဟုတ်ဘူးနော်)
– ကြက်သွန်ဖြူ (၁ ဥ) နဲ့ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ် ဒါးပြားရိုက်
– ဆီအိုးတည် (ဟင်းဇွန်း ၃)၊ ဒါးပြားရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေထည့် ဆီသတ်
– ဆီကျက်ရင် ပြည်ကြီးငါးထည့် (၅၀ သားလောက် ကို တုံးထားဦးနော်)
– ခရုဆီ (ဟင်းဇွန်း ၁)နဲ့ ဆားထည့်
– ရေနည်းနည်း ထည့်
– ရေပွက်လာရင် ခုနက အသီးအနှံတွေထည့်ပြီး ကြာညို့ နည်းနည်းထည့် အုပ်ထားပါ။
– ဆူလာရင် ကြက်သွန်မိတ်လေး အုပ်ပြီး တည်ခင်းနိုင်ပါပြီ ခင်ညာ။
– သခွါးသီးကို ခြစ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလှီး၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးကို သံပုရာသီး တလုံးစာ အရည်နဲ့ ဆားထည့် စိမ်ပြီး တွဲစားပါ ခင်ညာ။
ပြည်ကြီးရုတ်ပွ + ကိုက်လန်ကြော် + တို့ဟူးဟင်းရည်
– ပြည်ကြီးငါးကို ထုံးစံအတိုင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး
– ဂျင်း တစ်ဆစ် + နီ ၁ ဥ + ဖြူ ၁ ဥ ကို ညက်အောင်ထောင်း
– ငရုတ်ပွကို ရောင်စုံဝယ် (စိမ်း+ဝါ+နီ) တစ်လုံးစီ၊ ပြီးရင် လှီးထားးးး (သများတော့ တစ်မျိုး တစ်ပုံလှီးတယ်၊အပျင်းပြေ)
– ပြီးရင်ဆီအိုးတည်ထားတဲ့ထဲ အကုန်ရောထည့် (မပျင်းရင်တော့ တစ်ဆင့်ဆီသတ်ပေါ့လေ)
– အပွတွေ နွန်းလာရင် အပေါ့ အငံမြီးပြီး စားလို့ရပါပြီ။ ကြိုက်တတ်ရင် နံနံပင်ထည့်ပါ။
– ကိုက်လန် ကတော့ ကြော်တတ်သလိုကြော်ပါလေ။ ခွိခွိ။ (ရေးရမှာ ပျင်းလို့ပါ)
– ဥဖြူ၊ဂျင်း နည်းနည်းနဲ့တည်ထားတဲ့ ဟင်းရည်ထဲကို ဂေါ်ဖီပါးပါးနဲ့ဂျာပွန် တို့ဟူးလေး တုံးထည့်ထားတဲ့ ဟင်းချိုဆို ရပါပြီ။
ပြည်ကြီးငါးသုပ် + ကြက်ရိုးစွန်တန် + ပြောင်းဖူးကြော်
– နီ ဥ၊ ဖြူဥ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး ကို သေးသေးလေးတွေ လှီးထားးးး;
– ပြည်ကြီးငါးကို ကြိုက်သလို အရွယ်တုံးထားတာကို ရေနွေးဖျော။ တစ်ချို့က ဂျင်းနဲ့ပြုတ်တယ်။
– ဇလုံထဲ အကုန်ထည့်၊ သံပုရာရည်ညှစ်၊
– သများကတော့ အချစ်တော် ငပိစိမ်းစားလေး မီးဖုတ်ပြီးထည့်လိုက်သေးးး
– အစပ်ကြိုက်ချက်ကတော့ ငရုတ်သီးကြော်မှုန့်ကိုပါထည့်နယ်လိုက်ရင် အသုပ် ချဉ်ငံစပ် ရကရော။
– စွန်တန်ခြောက်ကိုသိတယ်ဟုတ်။ ဒီမှာ အဲဒါ အထုတ်လိုက်ဝယ်ထားတယ်။ကြက်ရိုးကို ဖြူ/ဂျင်းနဲ့တည်ပြီး အဲဒါခတ်လိုက်ရင် ၁၅ မိနစ်က ကြာသေးတယ်။။
– ပြောင်းဖူးလည်း ကြော်တတ်တယ်လို့ မှတ်လိုက်ပြီ။
ပြည် ဒိုးနပ် + အစိမ်းကြော်
သများကတော့ အကွင်းမှန်သမျှ ဒိုးနပ်လို့ပဲ ခေါ်ပလိုက်တာပဲ။
ပြည်ကြီးငါး အကွင်းကို ကြော်မယ်ဆိုတော့ ပြည် ဒိုးနပ်။
– သများ က အကြော်မှုန့် မစပ်တတ်ဖူးလေ။
– အဲဒီတော့ ရွှေလိပ်ပြာ အကြော်မှုန့်ရဲ့ ပင်တိုင်ဖောက်သည်ကြီးပေါ့
– ပြည်ကြီးငါးကို ကိုင်ပြီး အကွင်းကွင်းဖြစ်အောင် လှီးထား၊ ဆားလေးနဲ့နယ်ထားးး၊ ရေခြောက်နေအောင် စစ်ထားပါဗျို့။
– မုန့်နှစ် ပြစ်ပြစ်ဖျော်ထားတဲ့ ထဲကို အဲ အကွင်းတစ်ခါနှစ်၊
– ဆီအိုးကျက်တဲ့ထဲ တစ်ခါ နှစ်ကြော်၊ ၂ ခါ နှစ်ရသပေါ့။ ဆီမြုပ်ကြော်ရင် ပိုကောင်းးးးးး
– တွဲစားမဲ့ အချဉ်က ဖြူဥတွေကို တောက်တောက်စင်း၊ နံနံပင်၊ငရုတ်သီးတွေကို တောက်တောက်စင်း၊ ဆား/ငံပြာရည် သင့်ရုံထည့်ပြီး သံပုရာရည်ညှစ်လိုက်၊ သကြားနည်းနည်းထည့်၊အဲဒီ အချဉ်ရည်နဲ့စားပေရော့ပဲ။
– ကြိုက်တဲ့ အသီးအနှံနဲ့ ကော်ရည်နဲ့ ကြော်တဲ့ အစိမ်းကြော်ကတော့ ရေးတော့ပါဘူးနော့။ စားကြည့်လိုက်ပါတော့
ကေဇီ ဟင်းတစ်မျိုးမျိုးစားမိလိုက်ရင် အဲဒီဟင်းထဲ ဘာထည့်တယ်လို့အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းပြီး ပြန်ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ကြိုက်သွားတဲ့ ဟင်းမျိုးတွေကိုပေါ့။ နည်းမရနိုင်တဲ့ ဟင်းတွေမှာလေ။
ကိုယ်မေးလိုက်ရင် “အင်းးး၊ ဒီလိုပါပဲ” “အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး” ဘာညာက လာသေးတာ။ အဲဒါဆိုသိပြီ၊ မမေးချင်ရင်ဘယ်တော့မှဇွတ်မမေးဘူးးး
ကွကိုယ် ကြိုးစားတယ်။ ဟိ။
အာ့ကြောင့် ကျနော့ စားဖိုမှူးတွေကို ချစ်တာ။ ဘယ်သူမှ အိုင်တင်မခံဘူးးး ပညာမရှိုထားဘူးးးး။
စားဖိုမှူးတွေကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ပြောပါရစေ။
အဲလေ။ ပွါးနေတာ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် ၁၀ တန်းအောင်တဲ့ နှစ်လောက်က (သိပ်မကြာသေးဘူးးး အဟွတ်) ရန်ကုန် ရွှေဘဲမှာ ပြည်ကြီးငါးကင်တဲ့။
ပြည်ကြီးငါးကို စ စားဖူးတာ ပထမဆုံးပဲ။
အဖြူပြားပြားကြီးကို အကျက်ညီညီ ကင်ထားတာ။
အဲ။ နောက်မှတ်မှတ်ရရ ရန်ကုန် ရွှေဘဲကို လုံးဝမရောက်ဖြစ်တော့။
မန်းလေးမှာက မှာတိုင်း မရနဲ့ အဲဒီ အရသာကို ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးစားဖူးတယ်ပြောရမယ်။
အကင်ပြားပေါ် ကင်တယ်၊ တွန့်ပြီး ရှုံ့သွားတယ်။
နောက်ဆုံးက တော့ ခဲပတ်နဲ့ ကင်တယ်။ ပုံမပျက်ဘူးး ဒါပေမဲ့ လိုချင်တဲ့ အရသာ မရဘူးးး
အာဘင် နဲ့ ကင်ဖို့ကျန်သေးတယ်။ အာဘင်မဝယ်ရသေးလို့ မကင်နိုင်ဘူးးး
ပြည်ကြီးငါး ကြီးကြီးဝယ်ပြီး ကိုင်လိုက်။
ခေါင်းခေါ်မလား၊ လက်ခေါ်မလား အဲဒါကို လှီးထုတ်။
အမည်းရောင် အိပ်ကို ဖယ်၊ အပေါ်က အရေခွံကို ဖယ်။
ရေခြောက်မှ ဆားရယ် သကြားနည်းနည်းရယ် နယ်ထားတယ်။
နှပ်ထားပြီးမှ ခဲပတ်ထဲ ထောပတ်သုတ်ပြီး ကင်လိုက်တာပဲ။
စားဖြစ်တာပဲလေနော့။ ရွှေဘဲ အရသာရအောင် သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပါဦးးးးး
ဒီလင့်က ယူထားတယ်။ http://www.myittaryik.com/2011/10/blog-post_3222.html
ပြည်ကြီးငါး = လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် = ၆၀ကျပ်သား
ကြက်သွန်မြိတ်ဥ = ပါးပါးလှီး = ၁၀ဥ
ဂျင်း(ချင်း)နုနု = အခွံခွာ၊ ပါးပါးလှီး = အနည်းငယ်
ကြက်သွန်မြိတ် = လက်မ၀က်ထက်သေးသေးဖြတ် = အနည်းငယ်
စပါးလင် = ပါးပါးလှီး = အနည်းငယ်
ပင်စိမ်းရွက် = အနည်းငယ်
ပူဒီနာရွက် = အနည်းငယ်
ငရုတ်သီးစပ်စပ်အနီတောင့် = ပါးပါးလှီး = ၁တောင့်
အစပ်ရည်ဆမ်းစရာ = အနည်းငယ်
ငရုတ်သီးအစပ်တောင့် = ၃တောင့်
ကြက်သွန်ဖြူ = အခွံနွှာ၊ ပါးပါးလှီး = ၃တောင့်
သံပရာရည် = စားပွဲတင်ဇွန်း = ၄ဇွန်း
ငါးငံပြာရည် = စားပွဲတင်ဇွန်း = ၃ဇွန်း
အစပ်ရည်ဆမ်းစရာကို အရင်ပြုလုပ်ပါမယ်။ ကြိတ်စက်မှာ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ငရုတ်သီးအစပ်တောင့်၊ ဂျင်း(ချင်း)နဲ့ သံပရာရည်၊ ငါးငံပြာရည်တို့ထည့်ပြီး အားလုံးသမအောင် မော်တာဖွင့်ပြီးကြိတ်ပါ။ ပြီးရင် ခွက်တစ်ခုမှာထည့်ပြီး ခဏထားပါ။
ပြည်ကြီးငါးကို အရိအချွဲနဲ့ အဆီတွေကင်းစင်သွားအောင် သေသေချာချာပွတ်တိုက်ဆေးရပါမယ်။ ကျောရိုးကို အတွင်းထိနိူက်ပြီး ဖယ်ထုတ်ရပါမယ်။ သန့်စင်ပြီးရင် ပြည်ကြီးငါးကို ဓားနဲ့ အရှည်လိုက်ခွဲပြီး အတွင်းပိုင်းကိုလည်း သေသေချာချာဆေးပါ။ ပြီးမှ ပြည်ကြီးငါးအတွင်းသားကို ဓားနဲ့ထောင့်ဖြတ် အပြန်ပြန်အလှန်လှန်လှီးပါ။ ပြည်ကြီးငါးသန့်စင်ပြင်ဆင်ပြီးရင် ရေနွေးအိုးတည်ပြီး အရွယ်တော်လေးတွေ လှီးဖြတ်ပြီး နူးကျက်အောင်ပြုတ်ပေးပါ။
ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့ ပြည်ကြီးငါးကို ဇလုံတစ်လုံးမှာ ပြောင်းထည့်ကာ လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ဥ၊ စပါးလင်၊ ဂျင်း(ချင်း)၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပင်စိတ်းရွက်၊ ပူဒီနာစတာတွေနဲ့ရောပြီး အသာအယာရောနယ်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာ တည်ခင်းမယ့်ပန်ကန်ကို ဂေါ်ဖီရွက်ခင်းပြီး ပြည်ကြီးငါးဆလတ်သုတ်ထည့် အပေါ်က အစပ်ရည်လောင်း၊ ငရုတ်သီးလှီးထားတာဖြူးပြီး သုံးဆောင်ရမှာပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဆလတ်သုတ်မှာ ထိုင်းစတိုင်ဖြစ်ပြီး သကြားမထည့်ပါ။
စာလာဖတ်တဲ့သူတွေ ကို ဒီ ထိခေါ်လာရတာ မောတာ။
ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက် အမှန်က ပွါးချင်လို့ ဒီထိခေါ်လာတာ။
Cuttlefish ရယ် …. တူတူပါပဲကွယ်…..
အရသာက တူတူနီးပါးပါပဲလို့။ သများ အတွက်ပြောတာ။
ချက်နည်းကလည်း လေ့လာမိသလောက် အကုန်နီးပါးပဲ။ ဒီထက် ဆန်းပြားတဲ့နည်းသိရင်တော့ ခေါင်းခေါက်ပြီးကိုပြောပြသွားနိုင်ပါတယ်။
Octopus ကတော့ ရေဘဝဲလို့ခေါ်တဲ့ အကောင်လေ။ သိတယ်ဟုတ်။ ကတုံးနဲ့ လက်မှာ စုပ်ခွက်တွေနဲ့။ သူကရှင်းတယ်။
သများက ဘယ်မှာလည်နေတုန်းဆို Squid ရယ်၊ Cuttlefish ရယ်မှာ လည်နေတာ၊
ဗမာလို ကင်းမွန်ရယ်၊ ပြည်ကြီးငါးရယ် ဘယ်ဟာဘာကိုခေါ်မှန်းမသိတာ။
ခု သိသလောက်ကတော့ အဲဒီ ဗမာ အခေါ်အဝေါ် ၂ မျိုးလုံး Squid ကို ခေါ်တာ။ တရုပ်တွေကတော့ Sotong လို့ခေါ်တယ်။
Cuttlefish ကိုတော့ ဗမာလို ဘယ်လိုခေါ်တယ်မသိ။ သူ့ အသားကို မကြိုက်ဆုံးပဲ။ ထုံတုံတုံမို့။
သများက ဇော်လော်ဂျီ ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်တော့ ဘာမျိုးစိတ်တုန်း ဘာခေါ်တုန်း မမှတ်တော့ဘူးးး
အစား ဝါသနာရှင်မို့ အရသာနဲ့မှတ်ထားလိုက်တယ်။
ရေဘဝဲကတော့ အကြီးထက် ဘေဘီရေဘဝဲက စားကောင်းတယ်။
တရုတ်ချက်တာကတော့ အရသာစုံ ပိုကြိုက်တယ်။
ယိုးဒယားကတော့ ကြာဇံသုပ်တို့ သင်္ဘောသီးထောင်းတို့ထဲ ထည့်စားတာပဲ။
သများ မှတ်ထင်နေတာတွေ မှားနေရင်လည်း ပြောကြဦးနော်။
ဓာတ်ပုံများကိုတော့ အင်တာနက် မှ ရယူပါသည်…..
ချစ်သဲ ရဲ့ ပြည်ကြီးငါး နည်းပါ။
ပြည်ကြီးငါးအိပ်ကလေးတွေကို သန့်စင်ပါ။ အလည်ကကျောရိုးထုပ်ပါ။ ကျွန်မကတော့ အိပ်လိုက်ထားပြီး လက်ပါတဲ့ခေါင်းကိုဖြုတ်ထားပါတယ်။ သန့်သွားပြီဆိုရင် ကောင်ညှင်းပေါင်းအဖြူကို အိပ်တ၀က်လောက် ထည့်ပါ။ ချက်တဲ့အချိ်န် ( သို့ ) ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ကျူံ့သွား ရင် ကောက်ညှင်းတွေ ကွဲထွက်ကုန်ပြီးမလှ လို့။ ထိပ်ကနေ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ပိတ်ပါ။ ကျွန်မကတော့ အရသာမထည့်ပါဘူး။ ပေါင်းမယ်ဆိုရင် ဒီအဆင့်မှာပဲ ဆီလေးသုတ်ပြီးရေခံပေါင်းလို့ရပါပြီ။
အဲဆီပြန်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီး သားကိုဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီနှုတ်နှုတ်စင်းကိုထည့်ပါ။ နွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ အစောကအစာသွပ်ထား တဲ့ပြည်ကြီးငါးတွေစီထည့်၊ ရေနဲနဲလေးထည့်၊ မီးအေးအေးနဲ့ အဖုံးအုပ်တည်ပါ။ အရသာထည့်ပါ။ လိုအပ်ရင်ခပ်ဖွဖွမွှေခြင်း ( သို့ ) အိုးလှုပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးမထည့်ရပါဘူး။ ဆီနည်းနည်းပို ထည့်ရပါမယ်။ ဒါမှရေခန်းသွားရင် ခြောက်ခြောက်ကလေးနဲ့ဆီပြန်နေမှာပါ။ ကျက်ပြီဆိုရင်တော့ ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့တင်းနေတဲ့ ပြည်ကြီးငါးကောက်ညှင်းပေါင်းသွပ်ရပါပြီ။
ဦးကျောက် ရဲ့ ပြည်လုံးချမ်းသာ
(ကျနော်ကတော့ ပုဇွန်တို့ ဝက်ကလီစာတို့ပါထည့်တယ် ၊ အသားငါးက လိုတိုးပိုလျှော့ ကြည့်ညှိလို့ရတယ်)
အသည်းအမြစ် ၂ စုံ ငါးဖယ်လုံး ၁၅ လုံး ငုံးဥ (ပြုတ်ပြီး) ကြိုက်သလောက် ငါးကြင်းသား လက်မလောက် ၁၅တုံး (ဆားနယ်ပြီး ကြွပ်ကြွပ်လေး ကြော်ထား) ပြည်ကြီးငါး သံပုရာသီးနဲ့ ပွတ်တိုက် သန့်စင်ပြီး ရေဆေး ၊ ပြီးရင်ရေနွေးဖြော ၊ ဇကာကွက်မွှန်းပြီး လက်မလောက်တုံးထားပါ (မထည့်လဲရ)
မှို (ကောက်ရိုးမှို) သင့်တော်ရုံ (မထည့်လဲရ) မုန်လာဥနီ ၁၅၀ ဂရမ်လောက် ဂေါ်ဖီပန်း ၃၀၀ ဂရမ်လောက် ဗိုလ်စားပဲ ၁၅၀ ဂရမ်လောက်
အချိုမှုန့် (သို့) အသားမှုန့် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပဲငံပြာရည်အနောက် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကော်မှုန့် ၁ စတီးဇွန်း ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်
အရိုးပြုတ်အချိုရည် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်လုံး ဆီ ၂ စတီးဇွန်း
အသည်းအမြစ်ကို ရေဆေးသန့်စင် ၊ ရေခြောက်အောင်စစ်ထား ။ ပြီးရင် ရေဆူတွင် ကျက်ရုံပြုတ်ပြီး ဆယ်ထား ၊ အအေးခံ ။ အသည်းကို လွှာပြီး ပါးပါးလှီးပြီး အမြစ်ကို ပန်းပွင့်ဖော် လှီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ကြိုက်နှစ်သက်သလိုလှီးထား၊ မှိုကို ရေဆေးပြီး လှီးထားပါ။
ဒယ်အိုးတည်၊ ဆီထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ပြီး ဆီသတ် (နှမ်းဆီ ၂စက်လောက်ထည့်ရင်ပိုကောင်း) ။ အသည်းအမြစ်၊ ငါးကြော် ၊ ပြည်ကြီးငါးတို့ကိုထည့်ပြီး သမအောင်မွှေ၊ ပဲငံပြာရည်-အကြည်-အနောက်ထည့်၊ အသီးအရွက်များထည့်၊ သမအောင်မွှေပြီး ခေတ္တအုပ် ထားပါ။ ဆား၊ အချိုမှုန့်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေ ၊ အရိုးပြုတ်အချိုရည်လောင်းထည့်၊ ခေတ္တအုပ်ထားပါ။ ကော်မှုန့်ကို ရေဖျော်ပြီးထည့် ဆူလာလျှင် ငါးဖယ်လုံးနှင့်ငုံးဥထည့်၊ အရည်ဆူအောင်တည်ပြီးရင် ကြိတ်နိုင်ပါပြီ ။ ကြိုက်တတ်ရင် ငရုပ်ကောင်းမှုန့်အဖြူလေး ဖြူးပြီး စားသုံးနိုင်ပါသည်။
ဟိုနေ့ကပဲ တို့ ပင်လယ်စာအကြောင်းတွေပြောနေတာလေ၊
ဒီထမင်းဆိုင်ကလဲ စောစောမဖွင့်ဘူး။ ဆိုင်ရှေ့ကနေထိုင်စောင့်နေရတာ မောချက်။ အဲ့အတွက် လျှော်ကြေး အနေနဲ့အလကားကျွေးရမယ်။ ဒါဗြဲ။
ပြည်ကြီးငါးကတော့ ပင်လယ်စာထဲမှစားရဲတယ်။ ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်။ ကျေးဇူး။ လုပ်စားရအုံးမယ်။ ပြည်ကြီးငါးကိုအကွင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလှီးတာလဲ။ အဲ့ဒါလေးမသိလို့။ နဲနဲလေး အသေးစိတ်ပေးပါ။
ပြည်ကြီးငါးကင်ကတော့ ကြည့်ရတာ ညှပ်ကင်တယ်ထင်တယ်။ အနားတွေကို မတွန့်အောင်ညှပ်ကင်သလားမသိဘူး။ ဗန်းနဲ့ကင်တာတော့မြင်ဖူးတယ်။ သူကတော့ အရသာဘာမှမသွင်းဘူး။ ရေပဲပြောင်အောင်ဆေးထားပြီး သဘာဝအတိုင်းကင်တာ။ အရည်တွေစစ်သွားပြီး ချိုချိုလေး
နာ့ ချစ်သဲ အတွက်က ဆိုင်က တံခါးမရှိ ဓားမရှိ (ပေါင်ထားလို့)
ဒါကို ၁၂ ရက်ပို့ထားမိတာ။
အကွင်းလိုက်က အကောင်အတိုင်းကို လှီးရင် အကွင်းလိုက်ဖြစ်တာပဲ။
ချက်တဲ့ရက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့ပေးမယ်။
ကွကိုယ် ပြင်လို့ တည့်သွားတာမြင်လို့ လွှတ်ထားတာပါခီညော်..
အဟိ အိပ်ကလေးနဲ့က ဒီမှာတွေ့ခဲတော့ မတွေးမိဘူးရယ်။ အပြားအပြားလှီးထားတာပဲရှိတာများတယ်။ အဲ့တော့ ပြည်ကြီးငါးဒိုးနတ်ကတော့ အတော်ကံကောင်းမှစားရမဲ့သဘောရှိတယ်။ ဝေးပါဘီတော်
Made in China ဒွေနဲ့ချည်းနေရတဲ့ဘွကို လှောင်ပီး တစ်ပတ်လုံး ပြည်ကြီးငါးချက်ကျွေးဒါလားငင်င်င်င်
ရေဘွဲကိုတော့ ချောင်းသာမှာ ဒေသခံတွေက ရေမျောက်လို့ခေါ်သဟ…
ပင်လယ်စာထဲ ဒါပဲ ချက်ရတာ လွယ်တယ်ထင်လို့။ဟီးဟီးးး
Wow says: ရေဘွဲကိုတော့ ချောင်းသာမှာ ဒေသခံတွေက ရေမျောက်လို့ခေါ်သဟ..
ရခိုင်တွေလည်း အဲ့လိုခေါ်တာပဲ…ကင်းမွန်ကိုတော့ “ရေကြက်” လို့ခေါ်ကြတယ်
ငါးကျည်း ကျပ်တိုက်လို လုပ်ပြီးကျော်စားရင်ကောင်းမှကောင်း… :s:
ငါးလိပ်ကျောက် ကြိုက်မှကြိုက်ပေါ့ မိုက်မိုက်ရယ်…
ပြုတ်၊ မွပီး ငုတ်သီးခွဲခြမ်းနဲ့ ကျော်နှပ်… ကောင်းမှကောင်း :boss:
ငါးလိပ်ကျောက်တခါမှမစားဖူးဘူး။ ဘယ်လိုစားရတာလဲဟင်။ ၀ယ်လို့ရလားရန်ကုန်မယ်
ရန်ကုန်မှာ မတွေ့ဝူးလားလို့ မွသဲ…
တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ပုသိမ်ရောက်ရင် ငါးလိပ်ကျောက်ကုန်ကူးခဲ့ဘာ
ငါးလိပ်ကျောက် စားသမှ သိပ်စားးးး
ဟို ဟောင်ကောင်က လူဂျီး ချက်ခိုင်းးးးး
သူ အနော့ ကို ပင်လယ်စာပေးမယ် ပြောပြီး ပျောက်သွားတာ အခါလည်တော့မယ်။
ရမ်နမာပူ ..ကပ်ကူရံခြောက်…ဗေလေ ဆပ်..ဗေလေဆပ်…
ပြည်ကြီးငါးကို ထက်ခြမ်း ခြမ်းပြီး ဓါးပါးလေးနဲ့ သံဆန်ကာ ကွက်လေးတွေ လိုဖြစ်အောင်မွန်း ..
ဆားဆနွင်းနယ်ပြီး ဆီလေးနဲ့ လှိမ့်လိုက်ရင် ပုဇွန် အနံ့ အရသာ အတိုင်း ပိုစားကောင်း တဲ့ ခြေသုတ်ဖုံ ပုံစံ လေးတွေအတိုင်းထွက်လာတဲ့ ကင်းမွန် ဟင်းလေးတခွက်ရနိုင်ပါတယ်..
ဇီဇီ ပြောတဲ့ ကင်းမွန်ဒိုးနပ်ကို calamari လို့ခေါ်ပါတယ် Italian စကားနဲ့ပါ..အီတလီ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မရှိမဖြစ် appetizer တစ်ခုပါ..ဆောစ့်တစ်ခုခုနဲ့ dip လုပ်ပြီးစားကြပါတယ်..
squid, octopus and cattle fish တွေဟာဖအေတူ မအေပေး အဲ..မအေကွဲ
လင်ပါသား မယားပါသမီးများ ဖြစ်ကြ ပြီး အမျိုးနီးချင်းယူလို့ ပုံပြောင်းသွားကြတဲ့ ..
ကိုဆွေ(ဗေတားမဟုတ်) ကိုမျိုး(ဦးမျိုးသန့်မပါ) တွေ ဖြစ်ကြပါကြောင်း..
ဝါဆိုဝါခေါင်မှာလေ..ရွှေမိုးလေးတွေညို့တော့..ဗေတား ကမြင်းထတာတွေ..အိုး ကူမားရ် ရွခဲ့တာလေ..
နာ့ ဗေတားလေးပဲ နာ့ မေးခွန်းကို ဖြေသွားတယ်။
ဲပြည်ကြီးငါးကို အမျိုးစုံ ထုဆစ်ထားတဲ့ ဟင်းချက်တွေပါဘဲ။
ကိုခ က ဘာဟင်းကြိုက်တာတုန်းး?
ငါးလိပ်ကျောက် ပန်းကန်ပြားအရွယ်လေးတွေကို ကင်စား ရင် အရသာက ရှယ်ပဲ၊အကောင်ကြီးသား အစိမ်းကိုတော့ မကျီးမှည့် နဲ့ ချက်၊သပြုသီး ပေါ်ချိန်ဆို သပြုသီးနဲ့ ချက် လျှင် စားကောင်းတဲ့ ရှယ်ပင်လယ်စာပါ ။မကျီးမှည့် နဲ့ချက်တဲ့အခါ အသားကို ဆီသတ်ပီး လို့ ဆုံဆေးရေ(လုံးရေ)ထည့်တဲ့အခါ မကျီးရည်ပါ တခါထဲ ရောထည့်ပါ၊ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ ဟင်းကျက်ခါနီးမှ မကျီးရည် ထည့်မယ်ဆို ဟင်းရည်က ကြည်တုံတုံနဲ့ စားလို့လဲ မကောင်းပါ။
ဒီတစ်ပတ် ဖောက်သည် အသစ်ကြီးမလာရင် ဘယ်လိုက်ခေါ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ။
ငပလီက ဟိုတယ်မှာ.. ပြည်ကြီးငါးရခိုင်သုတ်… သေအောင်စပ်ပြီး အရမ်းကောင်းတယ်… သူ့လိုပြန်သုတ်လည်း သူ့လိုမထွက်ဘူး… ငါးလတ်ဆတ်မှုတို့ ငါးပိတို့များဆိုင်လားတော့မသိ.. :)) ပြည်ကြီးငါးကတော့ ဟိုတလောကရထားတဲ့ အကောင်ကြီးတွေကို နည်းမျိုးစုံလုပ်စားပြီး.. ဗူးသေးတစ်ဗူးကျန်သေးတယ်.. လောလောဆယ်တော့ ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားရင်ထည့်ချက်စားနေတယ်… တပတ်လုံးဆက်တိုက်ချက်ရင်တော့ သူ့လို အတက်တွေထွက်လာမလားမသိ..
ခုတောင် နာ့ အတက် (အဲလေ) လက်တံတွေ များ ရှည်လျားလာသလိုပဲ။
ဒါမဲ့ ရခိုင်သုပ်ကို သူ့ ရခိုင်မ သုပ်တာ မမှီဘူး ဆိုလို့ နာ့ဟာနာပဲ သုပ်ပြီး ကုန်အောင် စားဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ပတ် စားဖိုမှူးမရှိလို့ နားမလို့။
squid ထဲကို ကောက်ညှင်းထည့်ပြီး ပေါင်းစားကြည့်ပါလား …
ထားဝယ်ဘက်ကလူတွေ အဲဒါလုပ်တာ အရမ်းတော်တယ် ..
ကိုယ်တိုင်တော့ မလုပ်ဖူးဘူး ..
ဟိုတခါယောက်ခမွပုံတင်ဖူးဒလေ ချွိချွိ။ ကောက်ညှင်းသွပ်ပြီး ဆီပြန်ပြန်ချက်ထားတာကော
ဖဘမှာ မွှေတာ မတွေ့ဘူးးး
သများ ဒီပို့(စ) မှာ လာရှယ်ပေးပါနော်။
ဟင်တင်မိဘူးလား။ လုပ်နည်းပေးမယ်အဲ့ဒါဆို။ တင်မိတယ်မှတ်တာ။ စားမိတာဖြစ်မယ် အဟိ
အဲ့ဒီ ပြည်​ကြီးငါးရယ်​ ​ရေဘ၀ဲရယ်​ ကို အရင်​တုန်းကမစားရဲဘူး။ ​ဒီ​ရောက်​မှ ထားဝယ်​သူ​တွေ ဘိတ်​သူ​တွေနဲ့​ပေါင်းပြီး စားတတ်​သွားတာ။ အရင်​တစ်​​ခေါက်​အိမ်​ပြန်​​တော့ အိမ်​ကသူ​တွေကို ချက်​​ကြွေးဖို့ ​ဈေးသွားတဲ့ ​မေ​မေ့ကို မှာတာ မျက်​လုံးပြူးပြီး တအံတသြ အ​မေးခံရပါ​လေ​ရော။ ​မေးမှာ​ပေါ့ အရင်​တုန်းက အဲ့ကင်းမွန်​​တွေဝယ်​လာရင်​ ရန်​လုပ်​တတ်​လွန်းလို့ တအိမ်​လုံးမစားပဲ​နေလာခဲ့တာ။
အနော်လည်း မြန်မာပြည်တုန်းက တစ်ခါပဲစားဖူးတာ။
ကိုယ်တိုင်လည်း Octopus ရယ်၊ Squid ရယ်၊ Cuttlefish ရယ် ကို လည်နေတယ်။
Octopus ကို ပြည်ကြီးငါး ခေါ်တယ်။
Squid ကို အိပ်စွပ် လို့ ခေါ်တယ်။
Cuttlefish ကိုတော့ ကင်းမွန် လို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒီငါးတွေကို အခြောက်လုပ်ပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်ပို့ကြတာ များတယ်။
အစိုကိုတော့ ပြည်ကြီးငါးလောက်ပဲ စားဖူးတယ်။
ခိုင်ဇာပြောသလို ပြည်ဒိုးနတ် လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကင်းမွန်ကို သုံးရမယ်။
အနော်သိတာက Octopus ကို ရေဘဝဲ။
Squid ကို ပြည်ကြီးငါး (သို့) ကင်းမွန်လို့ခေါ်တာ။
Cuttlefish ကို ဘယ်လိုခေါ်တုန်းမသိဘူးးးး
သော်လေး အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပြည်ကြီးငါးအိပ်ကလေးတွေကို သန့်စင်ပါ။ အလည်ကကျောရိုးထုပ်ပါ။ ကျွန်မကတော့ အိပ်လိုက်ထားပြီး လက်ပါတဲ့ခေါင်းကိုဖြုတ်ထားပါတယ်။ သန့်သွားပြီဆိုရင် ကောင်ညှင်းပေါင်းအဖြူကို အိပ်တ၀က်လောက် ထည့်ပါ။ ချက်တဲ့အချိ်န် ( သို့ ) ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ကျူံ့သွား ရင် ကောက်ညှင်းတွေ ကွဲထွက်ကုန်ပြီးမလှ လို့။ ထိပ်ကနေ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ပိတ်ပါ။ ကျွန်မကတော့ အရသာမထည့်ပါဘူး။ ပေါင်းမယ်ဆိုရင် ဒီအဆင့်မှာပဲ ဆီလေးသုတ်ပြီးရေခံပေါင်းလို့ရပါပြီ။ အဲဆီပြန်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီး သားကိုဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီနှုတ်နှုတ်စင်းကိုထည့်ပါ။ နွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ အစောကအစာသွပ်ထား တဲ့ပြည်ကြီးငါးတွေစီထည့်၊ ရေနဲနဲလေးထည့်၊ မီးအေးအေးနဲ့ အဖုံးအုပ်တည်ပါ။ အရသာထည့်ပါ။ လိုအပ်ရင်ခပ်ဖွဖွမွှေခြင်း ( သို့ ) အိုးလှုပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးမထည့်ရပါဘူး။ ဆီနည်းနည်းပို ထည့်ရပါမယ်။ ဒါမှရေခန်းသွားရင် ခြောက်ခြောက်ကလေးနဲ့ဆီပြန်နေမှာပါ။ ကျက်ပြီဆိုရင်တော့ ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့တင်းနေတဲ့ ပြည်ကြီးငါးကောက်ညှင်းပေါင်းသွပ်ရပါပြီ။
ယောက်ခမွ။ ဖတ်ရတာနဲ့ကို စားချင်စရာ။
စကားမစပ် ချွိချွိရေ ပြည်ကြီးငါးကင်က ဘီယာလေးလောင်းလောင်းကင်ရသတဲ့။ ပြည်ကြီးငါးကို အရသာမထည့်ပဲ အကင်ပြားပေါ်တင် အပေါ်ကနေ ဘီယာလေးလောင်းရှယ်ပဲ။
တာကိုဆိုတဲ့..ရေဘ၀ဲက..အစိမ်းစားမကောင်းဘူး..။ ပြုတ်ပြီးစားရတယ်..။ အီကခေါ်တဲ့..ပြည်ကြီးငါးကတော့.. အစိမ်းလည်းကောင်း..အကင်လည်းကောင်း..
စားလို့ရတဲ့.. အမျိုးတော်တော်များတာတော့မှတ်မိတယ်..။ ရေဘ၀ဲလက်မလောက်လေးတွေဆို.. အစိမ်းအရှင်အတိုင်း… ဆာကေးနဲ့သိပ်စားကောင်း..။
နေဦး.. အဲဒီဂျပန်.. ငါးအင်ဆိုက်ကလိုပီးဒီးယားစာအုပ်.. အိမ်ကစာအုပ်ပုံထဲပြန်ရှာပြီး.. ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ပေးဦးမယ်..။
၂ချက် ၃ချက်လောက် ၀ါးရင် သေဗါဒယ်ဆို….
အသီး၂လုံး မရှိဒဲ့လူဂျီး …
ကိုရီးယားတွေ စားတာ မြင်ဖူးတယ်။
မတော်မသေပဲ လည်ချောင်းထဲတော့ ဗိုက်ထဲတော့ တွန့်လိမ်နေမှဖြင့်..!!
လက်မလောက်ရေဘ၀ဲဆိုတာလေးက.. စာအုပ်ထဲပြန်ကြည့်တော့ ဟိုတရုအီကဖြစ်နေတယ်..
ကျနော့ အင်ဂရီးဒီးရန့် ဒစ်ရှင်နရီ လည်း ပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်။
အဲမှာတော့ အသားတို့ အခြောက်တို့ပဲ ပါလို့ မရှာရသေးတာ..
လဆိုင်း ပြန်မပေးစနစ်နဲ့ စားမယ်လေ…
ကွကိုယ် ကံကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့ထဲမှာ ဘယ် အစားအသောက်နဲ့ မဆိုတည့်တဲ့ အကြောင်း တစ်ကြောင်းပါဝင်တယ်။
အသည်းအမြစ် ၂ စုံ
ငါးဖယ်လုံး ၁၅ လုံး
ငုံးဥ (ပြုတ်ပြီး) ကြိုက်သလောက်
ငါးကြင်းသား လက်မလောက် ၁၅တုံး (ဆားနယ်ပြီး ကြွပ်ကြွပ်လေး ကြော်ထား)
ပြည်ကြီးငါး သံပုရာသီးနဲ့ ပွတ်တိုက် သန့်စင်ပြီး ရေဆေး ၊ ပြီးရင်ရေနွေးဖြော ၊ ဇကာကွက်မွှန်းပြီး လက်မလောက်တုံးထားပါ (မထည့်လဲရ)
မှို (ကောက်ရိုးမှို) သင့်တော်ရုံ (မထည့်လဲရ)
မုန်လာဥနီ ၁၅၀ ဂရမ်လောက်
ဂေါ်ဖီပန်း ၃၀၀ ဂရမ်လောက်
ဗိုလ်စားပဲ ၁၅၀ ဂရမ်လောက်
အချိုမှုန့် (သို့) အသားမှုန့် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အနောက် ၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ကော်မှုန့် ၁ စတီးဇွန်း
ဆီ ၂ စတီးဇွန်း
ချက်စားအုံးမှာ။ ခုတော့သူမျာအိမ်ရောက်နေလုိ့။ အဲ့အိမ်မယ် ဘယ်သူမှလဲမရှိဘူး။ အိမ်အကူပဲရှိတာ။ ကိုယ်ကလဲ မြန်မာဟင်းမချက်တတ်တော့ ကွ့ကိုယ်စားနေကျအတိုင်းလက်စွမ်းပြလိုက်တာ နေ့ခင်းကိုယ်လဲ အပြင်ကပြန်လာရော အမရေ ကျွန်မနေ့ခင်းကလဘက်သုတ်နဲစားလိုက်တယ်တဲ့။ အဟိနောက်နေ့ဈေး သွားတော့ မြန်မာဟင်းစပ် အတော်စပ်ယူလိုက်ရတယ် ဗြဲ :byee: ။ ချွိချွိထမင်းဆိုင်ပိုစ့်ကို ပရင့်ထုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကလဲအိမ်မယ်ကျန်ခဲ့တော့ အောင်မယ်လေး
နေပူတော်က အပြန် ၁၁၅ မိုင် Feel မှာ ရုံးစရိတ်နဲ့ ကြက်ပြည်လုံးချမ်းသာနဲ့ ထမင်းဝင်စားခဲ့သေးတယ် … (အလွတ်ဝင်ကြွားချင်း)
ဒီမှာတော့ ရေထရက်ဆို… ပြည်ကြီးငါး / ကင်းမွန် အလွန်ပေါ…
အသားချည်း ၁၀လက်မလောက်အရွယ် ၂ကောင်ကို စလုံး ၃ဒေါ်လှလောက်ပဲ…
ကျောက်စ်ကတော့ အနှစ်လေးနဲ့အစပ်ချက်တယ် ၊ ပြီးရင် ရုံးပတီသီးလေးအုပ်…ဂွဒ်
ကင်တာရယ် သုပ်တာရယ်ကလွဲရင် ချက်တာကို သိပ်မကြိုက်ဘူးးး
ကင်တာရော သုပ်တာရော ချက်တာရော ကြိုက်တယ်…။
ကျွေးမယ့်သူရှိရင် စားမယ် ဒါဗျဲ…။
ကျွေးမဲ့ ဒကာ ပေါ်ရင် လက်တို့လိုက်စမ်းဘာ့!!